KNU နယ်မြေ မြန်မာ့တပ်မတော် လက်နက်ကြီး ပစ်ခတ် – Friday Times
ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မီဒီယာနဲ့တွေ့ဆုံလိုက်တဲ့ ဦးဌေးအောင်
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဝတ်ပြုခရီးစဉ်များကို ဆော်ဒီနိုင်ငံက ခေတ္တဆိုင်းငံ့
၂၀၂ဝရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ရင်ဆိုင်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် ဦးဌေးအောင်နဲ့တွေ့ဆုံခြင်း
ရွှေစာရံဘုရားပွဲတော်ကို ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်မှုမရှိစေရန် ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်
မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်(အင်းစိန်)မှ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးသိန်းပေါင်း တစ်ထောင်ကျော် ခိုးယူထွက်ပြေး
KNU နယ်မြေ မြန်မာ့တပ်မတော် လက်နက်ကြီး ပစ်ခတ်
February 11, 2020 February 11, 2020 FridayTimes	0 Comments KNU, မြန်မာ့တပ်မတော်, လက်နက်ကြီး
ဖာပွန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးတပ်မဟာ (၅)ဒေတွင် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၃ရက်နေ့ကနေ ၈ ရက်နေ့ အထိ ၆ ရက်အတွင်းမြန်မာတပ်မတော်ဘက်ကလက်နက်ကြီးအလုံး ၆ဝကျော် ပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ရွာသား ၃၀၀ ကျော် နေရပ်စွန်ခွာ ခဲ့ရသည်။
ထို့အပြင် ကေအန်ယူ ထိန်းချုပ်ရာ ဒေသများတွင် ဒရုန်းယာဉ်များနှင့် စုံစမ်းထောက်လှမ်းမူများလုပ်ခဲ့ကြောင်း တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်မူ ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် NCA ကိုချိုးဖောက်ရာ ရောက်ကြောင်း ကေအန်ယူ တပ်မဟာ ၅ က ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၉ ရက်နေ့ မြန်မာတပ်မတော်ဘက်ကို ကန့်ကွက်စာပေးပို့သည် ။ ဗွီအိုအေ သတင်းထောက် မအေးအေးမာက သတင်းပေးပို့ ထားသည်။
ကရင်ပြည်နယ်၊ ဖာပွန်ခရိုင်မှာ လှုပ်ရှားနေသည့် မြန်မာတပ်မတော်တပ်ဖွဲ ့ဝင်များသည် ဖေဖော်ဝါရီလ လဆန်းကစ၍ ကရင်အမျိုးသားတပ်မတော် တပ်မဟာ ၅ နယ်မြေတွင် လက်နက်ကြီးများနှင့် ပစ်ခတ်နေသည်ဟုဆိုသည်။ ထို့အပြင် ဖာပွန်ခရိုင်၊ ဒွယ်လိုးမြို့နယ် ၊ လေးဖိုးထာ ကျေးရွာအုပ်စုက ဝါသိုးခို ကျေးရွာသားနှစ်ဦး ပစ်ခတ်ခံရခြင်းကြာင့် ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာ ရခဲ့ကြောင်း ကေအန်ယူ တပ်မဟာ(၅) ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မူးစောကလဲဒိုက ယခုကဲ့သို့ ပြောသည်။
“လက်နက်ကြီးနဲ့ ပစ်တာက ဖေဖေါ်ဝါရီ ၃ရက်နေ့ အလုံး ၄၀ ရှိတယ်။ ၆ရက်နေ့ က တူတေးရွာမှာ ရလုံး၊ တခြားရွာ မှာ ၆လုံး ၈ ရက်နေ့မှာ ပစ်တာက တူဒေးရွာမှာ ၁၅လုံး၊ အလုံး ၆ဝကျော်ပစ်တယ်။ တူဒေးရွာကတော့ ဒီနေ့မှာပဲ ရွာကိုပြောင်းရွှေ့တယ် ရွာသား ၃ဝဝကျော်တယ် ။ နောက်တခုကတော့ ရွာသား ၂ယောက်က သေသွားတဲ့သူရဲ့ ပစ္စည်းတွေကို တနေရာမှာသွား ပစ်နေတုန်းမှာ တပ်မတော်သားဘက်က ဒီရွာသား၂ယောက်ကို ပစ်ချလိုက်တာ။ဒီရွာ ၂ယောက်လုံး ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရတယ် ။ ပစ်ခတ််မူဖြစ်တာ တပ်အချင်းချင်းဆို ပြဿနာမရှိဘူး။ ရွာသားကို ပစ်တာက မကောင်းဘူး။ ရွာသားက ပိုနာတာပေါ့ NCA နဲ့ ပတ်သက်တာတွေကို ချိုးဖောက်တာပေါ့” ဟုပြောဆိုခဲ့သည်။
မြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကတော့ ကေအန်ယူထိန်းချုပ်ရာဒေသတွေကို ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုပြီး လမ်းဖောက်လုပ်သည့်ကိစ္စများ လုပ်နေသည်။ ယင်းအတွက် ကေအန်ယူ လက်အောက်ခံ အောက်ခြေတပ်မဟာများနှင့် တိုက်ပွဲတချို့ ဖြစ်ခဲ့သည်။ တပ်မဟာ၅ လက်အောက်ခံတပ်များနှင့် မကြာခဏဆိုသလို ထိတွေပစ်ခတ်မူများဖြစ်ခဲ့သလို ကေအန်ယူ ဘက်က ကန့်ကွက်မူများရှိသော်လည်း မြန်မာတပ်မတော်ဘက်က ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟု ကေအန်ယူဘက်ကဆိုသည်။ အခုနောက်ပိုင်းတွင် ရွာများကို လက်နက်ကြီးများနှင့် ပစ်ခတ်မူများ လုပ်နေသည့်အပြင် ကေအန်ယူ ထိန်းချုပ်နယ်မြေများပေါ်တွင် ဒရုန်းယာဉ်များ လွှတ်၍ စုံးစမ်းထောက်လှန်းမူများ ပိုလုပ်လာသည်ဟုလည်းဆိုသည်။ ဗိုလ်မူးစောကလဲဒိုကတော့ ၎င်းတို့နယ်မြေအတွင်းမှာတော့ထောက်လှမ်းမူများ ခပ်စိပ်စိပ် လုပ်လာသည်ဟု ဆိုသည်။
“တပ်မဟာ ၅ဘက်မှာ တော့ မြန်မာတပ်မတော်ဘက်က ၂၀၁၈မှာ ဒရုန်းယာဉ်တွေကို ကြိုးကြားလွှတ်တယ်။ ၂၀၁၉မှာဒရုန်းကိုလွှတ်တာ ပိုများလာတယ်။ ၂၀၂ဝမှာလည်း ဆက်လက်ပြီးလွှတ်တာပဲ။ ဒီလို ဆက်လုပ်နေရင် တဘက်နဲ့ တဘက်ယုံကြည်မူကို ပိုထိခိုက်စေပြီး တဘက်နဲ့ တဘက် မယုံကြည်တော့ပဲ ပြဿနာကိုပိုပြီး ကြီးထွားလာတာဖြစ်သွားတယ်။ NCA စာချုပ်ထဲမှာ က ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်နေတဲ့ကာလ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကာလမှာ နိုင်ငံရေး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလုပ်နေတဲ့ ကာလမှာ တဘက်နဲ့ တဘက်ကိုစုံစမ်းထောက်လှမ်းတာ လုံးဝမလုပ်ရဘူးဆိုတာလည်းပါထားတယ် ” ဟုပြောခဲ့သည်။
KNU-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး တပ်မဟာ (၅)ကတော့ သူတို့ ထိန်းချုပ်ရာကျေးရွာတွေ လက်နက်ကြီးနှင့် ပစ်ခတ်မူ ရွာသားများ ပစ်ခတ်ခံရမူများနှင့် ပတ်သက်လို့ ဖေဖော်ဝါရီ ၉ရက်နေ့စွဲနှင့် အရှေ့တောင်တိုင်းစစ်ဌာန ချုပ်ကိုကန့်ကွက်စာပို့ထားသည်။
ကေအန်ယူတပ်မဟာ ၅ ကန့်ကွက်စာပို့ ထားသည့် အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ အရှေ့ပိုင်း စစ်ဌာနချုပ်က တာဝန်ရှိသူတွေကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းရန် အကြိမ်ကြိမ် ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း ဆက်သွယ်၍ မရခဲ့ဟု သိရသည်။
မြန်မာအစိုးရနှင့် ကေအန်ယူတို ့သည်၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်း ဖြစ်၍၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် တော့ တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခတ်မူ ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် NCA ကို KNU က လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ သို့သော် ကေအန်ယူတပ်မဟာ ၅နယ်မြေမှာတော့မြန်မာစစ်တပ်နှင့် ကေအန်ယူတို့သည် NCA ထိုးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ထိတွေ ပစ်ခတ်မူများ မကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။◾
KNU နယ္ေၿမ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ လက္နက္ႀကီး ပစ္ခတ္
ဖာပြန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁
ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံးတပ္မဟာ (၅)ေဒတြင္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၃ရက္ေန႔ကေန ၈ ရက္ေန႔ အထိ ၆ ရက္အတြင္းျမန္မာတပ္မေတာ္ဘက္ကလက္နက္ႀကီးအလုံး ၆ဝေက်ာ္ ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ရြာသား ၃၀၀ ေက်ာ္ ေနရပ္စြန္ခြာ ခဲ့ရသည္။
ထို႔အျပင္ ေကအန္ယူ ထိန္းခ်ဳပ္ရာ ေဒသမ်ားတြင္ ဒ႐ုန္းယာဥ္မ်ားႏွင့္ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းမူမ်ားလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း တစ္နိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မူ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA ကိုခ်ိဳးေဖာက္ရာ ေရာက္ေၾကာင္း ေကအန္ယူ တပ္မဟာ ၅ က ေဖေဖၚဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔ ျမန္မာတပ္မေတာ္ဘက္ကို ကန႔္ကြက္စာေပးပို႔သည္ ။ ဗြီအိုေအ သတင္းေထာက္ မေအးေအးမာက သတင္းေပးပို႔ ထားသည္။
ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ခရိုင္မွာ လႈပ္ရွားေနသည့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ ့ဝင္မ်ားသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ လဆန္းကစ၍ ကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ တပ္မဟာ ၅ နယ္ေျမတြင္ လက္နက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပစ္ခတ္ေနသည္ဟုဆိုသည္။ ထို႔အျပင္ ဖာပြန္ခရိုင္၊ ဒြယ္လိုးၿမိဳ႕နယ္ ၊ ေလးဖိုးထာ ေက်းရြာအုပ္စုက ဝါသိုးခို ေက်းရြာသားႏွစ္ဦး ပစ္ခတ္ခံရျခင္းၾကာင့္ ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာ ရခဲ့ေၾကာင္း ေကအန္ယူ တပ္မဟာ(၅) ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္မူးေစာကလဲဒိုက ယခုကဲ့သို႔ ေျပာသည္။
“လက္နက္ႀကီးနဲ႔ ပစ္တာက ေဖေဖၚဝါရီ ၃ရက္ေန႔ အလုံး ၄၀ ရွိတယ္။ ၆ရက္ေန႔ က တူေတးရြာမွာ ရလုံး၊ တျခားရြာ မွာ ၆လုံး ၈ ရက္ေန႔မွာ ပစ္တာက တူေဒးရြာမွာ ၁၅လုံး၊ အလုံး ၆ဝေက်ာ္ပစ္တယ္။ တူေဒးရြာကေတာ့ ဒီေန႔မွာပဲ ရြာကိုေျပာင္းေရႊ႕တယ္ ရြာသား ၃ဝဝေက်ာ္တယ္ ။ ေနာက္တခုကေတာ့ ရြာသား ၂ေယာက္က ေသသြားတဲ့သူရဲ့ ပစၥည္းေတြကို တေနရာမွာသြား ပစ္ေနတုန္းမွာ တပ္မေတာ္သားဘက္က ဒီရြာသား၂ေယာက္ကို ပစ္ခ်လိုက္တာ။ဒီရြာ ၂ေယာက္လုံး ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာရတယ္ ။ ပစ္ခတ္္မူျဖစ္တာ တပ္အခ်င္းခ်င္းဆို ျပႆနာမရွိဘူး။ ရြာသားကို ပစ္တာက မေကာင္းဘူး။ ရြာသားက ပိုနာတာေပါ့ NCA နဲ႔ ပတ္သက္တာေတြကို ခ်ိဳးေဖာက္တာေပါ့” ဟုေျပာဆိုခဲ့သည္။
ျမန္မာစစ္တပ္ဘက္ကေတာ့ ေကအန္ယူထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒသေတြကို ေဒသဖြံ့ၿဖိဳးေရးဆိုၿပီး လမ္းေဖာက္လုပ္သည့္ကိစၥမ်ား လုပ္ေနသည္။ ယင္းအတြက္ ေကအန္ယူ လက္ေအာက္ခံ ေအာက္ေျခတပ္မဟာမ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲတခ်ိဳ႕ ျဖစ္ခဲ့သည္။ တပ္မဟာ၅ လက္ေအာက္ခံတပ္မ်ားႏွင့္ မၾကာခဏဆိုသလို ထိေတြပစ္ခတ္မူမ်ားျဖစ္ခဲ့သလို ေကအန္ယူ ဘက္က ကန႔္ကြက္မူမ်ားရွိေသာ္လည္း ျမန္မာတပ္မေတာ္ဘက္က ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု ေကအန္ယူဘက္ကဆိုသည္။ အခုေနာက္ပိုင္းတြင္ ရြာမ်ားကို လက္နက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပစ္ခတ္မူမ်ား လုပ္ေနသည့္အျပင္ ေကအန္ယူ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားေပၚတြင္ ဒ႐ုန္းယာဥ္မ်ား လႊတ္၍ စုံးစမ္းေထာက္လွန္းမူမ်ား ပိုလုပ္လာသည္ဟုလည္းဆိုသည္။ ဗိုလ္မူးေစာကလဲဒိုကေတာ့ ၎တို႔နယ္ေျမအတြင္းမွာေတာ့ေထာက္လွမ္းမူမ်ား ခပ္စိပ္စိပ္ လုပ္လာသည္ဟု ဆိုသည္။
“တပ္မဟာ ၅ဘက္မွာ ေတာ့ ျမန္မာတပ္မေတာ္ဘက္က ၂၀၁၈မွာ ဒ႐ုန္းယာဥ္ေတြကို ႀကိဳးၾကားလႊတ္တယ္။ ၂၀၁၉မွာဒ႐ုန္းကိုလႊတ္တာ ပိုမ်ားလာတယ္။ ၂၀၂ဝမွာလည္း ဆက္လက္ၿပီးလႊတ္တာပဲ။ ဒီလို ဆက္လုပ္ေနရင္ တဘက္နဲ႔ တဘက္ယုံၾကည္မူကို ပိုထိခိုက္ေစၿပီး တဘက္နဲ႔ တဘက္ မယုံၾကည္ေတာ့ပဲ ျပႆနာကိုပိုၿပီး ႀကီးထြားလာတာျဖစ္သြားတယ္။ NCA စာခ်ဳပ္ထဲမွာ က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ေနတဲ့ကာလ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကာလမွာ နိုင္ငံေရး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးလုပ္ေနတဲ့ ကာလမွာ တဘက္နဲ႔ တဘက္ကိုစုံစမ္းေထာက္လွမ္းတာ လုံးဝမလုပ္ရဘူးဆိုတာလည္းပါထားတယ္ ” ဟုေျပာခဲ့သည္။
KNU-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး တပ္မဟာ (၅)ကေတာ့ သူတို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ရာေက်းရြာေတြ လက္နက္ႀကီးႏွင့္ ပစ္ခတ္မူ ရြာသားမ်ား ပစ္ခတ္ခံရမူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ရက္ေန႔စြဲႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာန ခ်ဳပ္ကိုကန႔္ကြက္စာပို႔ထားသည္။
ေကအန္ယူတပ္မဟာ ၅ ကန႔္ကြက္စာပို႔ ထားသည့္ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရွ႕ပိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္က တာဝန္ရွိသူေတြကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္၍ မရခဲ့ဟု သိရသည္။
ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ေကအန္ယူတို ့သည္၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္း ျဖစ္၍၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေတာ့ တစ္နိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မူ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA ကို KNU က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေကအန္ယူတပ္မဟာ ၅နယ္ေျမမွာေတာ့ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ေကအန္ယူတို႔သည္ NCA ထိုးခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိေတြ ပစ္ခတ္မူမ်ား မၾကာခဏဆိုသလိုျဖစ္ပြားခဲ့သည္။◾
← အဂတိအမှုဖြင့်တရားစွဲထားသည့် မြို့နယ်မှူးဟောင်းအပါအဝင် ရဲလေးဦးကိုအလုပ်နှင့် ထောင်ဒဏ်များချမှတ်
ထိုင်းပစ်ခတ်မှု နောက်ကွယ်ကဇာတ်လမ်း →
အော်တစ်ဇင်ကျောင်းက ကလေး နှိက်စက်ခံရမှု မြောက်ဒဂုံတရားရုံးမှာ တရားစွဲတင်မယ်
February 4, 2020 FridayTimes 0
မင်းပြားတိုက်ပွဲကြောင့် ကိုးလအရွယ် ကလေးတစ်ဦး သေဆုံး
January 12, 2020 FridayTimes 0
ဝူဟန်မြို့ကခေါ်လာသည့် မြန်မာကျောင်းသား (၅၉)ဦး ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သဖြင့်နေရပ်ပြန်ပို့မည်
February 12, 2020 February 12, 2020 FridayTimes 0
Friday Times provides you with the latest breaking news, top stories and videos straight from the entertainment industry.
Copyright © 2020 Friday Times. All rights reserved.